Ungaba kanjani onguchwepheshe wezokuthengisa we-Inthanethi osebenzayo?
Izwe lanamuhla lanamuhla liye laphindiswa ngokwengeziwe kunanini ngaphambili, njengoba ukulinganisa okujwayelekile kusitshela ukuthi ingxenye engaphezu kwengxenye yomhlaba wonke ibasebenzisi abemi, ukuphequlula kwi-Internet cishe nsuku zonke. Manje abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezintathu ze-intanethi baqhuba imboni yokudayiswa kwedijithali ithonya elikhulu kunazo zonke empilweni yethu yangempela. Ngenxa yalokho, imikhakha edijithali yokusebenza njengomchwepheshe wezokuthengisa inthanethi, imenenja yokuthengisa, ucwaningo lwe-intanethi, i-CRM, noma isazi sokuthuthukiswa kwemikhiqizo zifunwa ngamandla ngenani elikhulayo lezinkampani ezihlobene nomkhakha.
Ngaphambi kokuba siqale, asibuye sibone futhi. Uma sithi umchwepheshe wezokumaketha we-intanethi, ngokuvamile kuvamise ukuthi sibhekisela kumkhiqizo noma ukukhuthazwa komkhiqizo kumidijithali yedijithali. Le nsimu yokukhangisa yangaphambili isebenzelana nemikhankaso yokukhangisa ku-intanethi ngeziteshi zedijithali ezisekelwe kwiindlela ezibaluleke kakhulu ze-imeyli nezokuxhumana. Isazi sesimanje sokudayiswa kwe-inthanethi sigxile ekwakheni igunya elinamandla legama lomkhiqizo, nokuqinisa ukuqwashisa kwe-intanethi ngamakhasimende angaphezu kwamandla amaningi wokuguqulwa okukhulu okubashayela kubathengi bangempela emva kwakho konke. Abadlali abahola lapha sebevele basetshenziselwe ukutshala izimali emikhankaso yokukhangisa edijithali efana nokucwaninga kwedatha enkulu, ukumaketha kokuqukethwe nokunye okunye. Futhi umgomo oyinhloko cishe wonke ochwepheshe bezokukhangisa ku-intanethi ukushayela ukubandakanyeka okukhulu kwamakhasimende ngokusebenzisa ukwanda kokwenyuka komgwaqo okhokhelwayo noma okhokhelwayo.
Ngakho-ke, kungani ukumaketha kwe-digital kuye kwadume kakhulu emhlabeni jikelele? Ngakho-ke, kungani umchwepheshe wezokuthengisa we-inthanethi efunwa manje ukuqasha? Okokuqala, ukumaketha kwedijithali yanamuhla kungakuthola kalula ukunemba okuhlosiwe, ngokuvamile okukwazi ukuletha imiphumela esheshayo. Kuyinto eshibhile kakhulu nakanjani ngokuphumelelayo kakhulu ngokumelene neyokuqala. Ngisho nezinzuzo ezikhulunywe ngenhla ziyakhuthaza ngokwanele, kufanele ngivume. Ngakho-ke yimaphi amakhono asebenzayo kakhulu okumele azuzwe manje yizo zonke izichwepheshe zokuthengisa eziku-intanethi ezihamba ngendlela eya empumelelweni yobuchwepheshe?
Ake sizame ukuloba ukuthi yiliphi ikhono elisezingeni elidingekayo ukuze sibe ngumqeqeshi ofanelekile ensimini. Into yukuthi kunezifundo eziningi ezihlukahlukene ezihlinzekwa kwi-intanethi. Ngakho-ke, kunzima ukwenza umehluko oqondile futhi unikeze iseluleko esilungile. Noma kunjalo, engingakusho ngokuqinisekile ukuthi wonke ochwepheshe wezokukhangisa ku-intanethi kufanele abe nolwazi olujulile kuma-analytics wewebhu, aqiniseke ngegama eliyisisekelo lokukhangisa kwe-digital, aqonde imiqondo esemqoka yokufundwa kwangempela, futhi azijwayele amasimu jikelele kanye nezinhlaka eziqinile zokudayiswa kwedijithali yanamuhla.
Kodwa ungayithola kanjani inkambo efanele ukuba ube ngumchwepheshe wezokuthengisa wokuqeqeshwa online? Ngikholelwa ukuthi izifundo ezinjalo kufanele ziphelele futhi ziphelele, qinisekisa ukuthi zihlanganisa okungenani izici ezilandelayo uma ukhetha okulungile:
imiqondo esemqoka (i-Search Engine ne-Conversion Rate Rate, Media Media kanye Ukukhangisa Okuqukethwe, I-Web Analytics, Amasu E-Imeyili Namaselula Wokumaketha, Ukukhangisa Kokukhokha Okukhokhelwayo, njll. )
amathuluzi amakhulu kanye nezinhlaka (Ukukhokha ngakunye kwezikhangiso, i-AdWords, i-Google Analytics, i-YouTube, i-Facebook, i-Twitter, njll Source . )